Mivavaha ho an’i Madagasikara – Tsodrano
2016 –Vavaka mandritra ny herinandro
29 février – 6 Mars : Ho an’ny Fiangonana
Ny kristiana, ny mpino hafa rehetra, Ny manana andraikitra rehetra ao amin’ny Fiangonana, ny miomana hitondra fiangonana.
7 – 13 Mars : Ho an’ny vehivavy rehetra-
Ny manana andraikitra amin’ny raharaham-pirenena, ny vehivavy kilemaina, ny maty vady, ny voaolana, ny mamono vady na vonoin’ny vady, ny miteraka nefa tsy manambady, ny mananontena, ny tokantena, ny vehivavy tsy manan-zo ao an-tokantrano,ny sahirana ara-pivelomana, ny voan’ny aretina tsy mety sitrana, ny nanary ny zanany,ny voambaka.
Ry vehivavy malala.
Nahoana moa no tsy hizara ny fifaliana amin’ny vehivavy rehetra eran-tany nahatratra ity andro androany ity. Faly satria mbola afaka mitafatafa aminao. Miarahaba anao tsy maty fo aman’aina eto amin’izao tontolo izao sahirana amin’ny tarehin-zavatra maro samihafa miseho.
Midera ireo vehivavy rehetra n’aiza n’aiza misy azy ka tafiditra ao amin’ilay faritra hoe : tafita. Tamin’ny fitaizana noraisiny tamin’ny ray amandreniny, tamin’ny fianarana nilofosany, tamin’ny harena, tamin’ny fahasalamana tsy misy tomika. Raha atambatra : miarahaba anao ao amin’ny filaminana sy ny fizoran’ny fiainana fenoin’ny masoandro mibaliaka. Tao ny fiezahana nataonao fa tsy tongatonga ho azy ny fahasambarana iainanao.Koa misaora an’Andriamanitra.
Mangotsoka koa ny tena rehefa mahita vehivavy maro te hisondrontra fa tsy tonga amin’izay tanjona iriny. Indraindray ny havany akaiky no mandrara ny fivoarana ka ambaniana toy ny mpanompo aza. Tsy afaka mivoaka ny trano, tsy afa-mianatra, toy ny gadra. Maro ny mahita faisana satria voakapoka na hampijaliana raha manohitra fa te hanana ny tsara eo amin’ny lafiny fahalalana. Ao izay lasa mpivarotena nefa tsy nihevitra ny ho tonga amin’nizany fa voafitaka satria te hiavo tena.Ao ireo mitondra takaitra lalina ao amin’ny tenany noho ny hasomparana nihatra taminy. Ao ireo mamoy fo ka mamono tena aza. Mivavaha ho azy ireny.
Mampitomany ny mandre ny tantaran’ireo vehivavy tratran’ny fitsoahamponenana. Manao vy very ny aina mba hahita toerana hahafahana amin’ny ady sy ny fahoriana haterak’izany.Miharitra ny mangidy rehetra eny an-dalana. Nefa dia tsy tafita fa fahafatesana no nitsena. Misy ireo akaiky ho voavotra vao rendrika. Tsy fantatry ny havany izay niafarany. Firifiry moa ireo izay ao amin’ny toerana voafaritra na aty Eoropa na Afrika sy ny tany hafa misy azy ireny. Mivavaha ho azy ireny.
Tsy manadino koa ny vehivavy malagasy. Firy no mahatsiaro tena sambatra eto amin’ity Nosy lehibe misy azy ity. Raha ny tanintsika no farany amin’ny tany mahantra dia farany koa ny ankamaroan’ny vehivavy aty amintsika. Zara raha misy trano hipetrahana ny an’ny sasany. Ao ny mitsindroka zordira aza. Firy ny nandao ny tranony satria nisy nandoro. Na maty fa nisy sakoraka diso tafahoatra. Na tsy hita. Firy ireto tovovavy adolantsento tena mahia satria tsy ampy sakafo. Maharitra hafirina ny fe-potoana hiainany. Hahatra izany hoe 100 taona ? 50 ? Firy ireo voarebireby satria raviravizana vola kanefa voaloto sy lalaovina fotsiny. Mivavaha. Tsy mahavita tena isika raha tsy mifanampy raha te ho tafita ary ny Fanahin’Andriamanitra no hampahery sy hampijoro antsika na dia sarotra aza. Andriamanitra no mambomba anao toy ny fambomban’ny akoko ny zanany. Momba anao isan’andro Izy. Amena
14 – 20 mars : Ho an’ny manampahefana
-Ny filohan’ny Nosy, ny ministra, ny maire, ny filohampokotany, ny depiote, ny senatera sy ny mpiara-miasa amin’izy rehetra.
21 – 27 mars : Ho an’ny miaramila-ny zandarma-ny polisy.
Ny mpampianatra sy mpampiofana, ny mpianatra miaramila, zandarma, polisy, ny hivoaka miaramila, zandarma sy polisy, ny toerampianarana, ny toerampiofanana-
28 mars-3 avril : Ho an’ny Fonja.
Ny lehiben’ny fonja, ny migadra, ny mpiambina, ny mpiasa ao an-toerana,ny migadra amin’ny antony tsy marina,ny mpamangy ny mpigadra, ny miandry fitsarana-
Ny ankizy tsy ampy taona migadra, ny ankizy namono olona-
Ny zaza teraka any am-pigadrana-
4 avril – 10 avril : Ho an’ny Fitsarana
Ny Mpitsara, ny mpisolovava, ny huissier, ny greffier, ny ho tsaraina, ny voaheloka,ny voaheloka amin’ny tsy marina, ny mpiasa mifandray amin’ny toeram-pitsarana
11 avril – 17 avril : Ho an’izay miady amin’ny kolikoly
18 – 24 avril : Ho an’ny mpanao gazety sy mpilaza vaovao
Ny mpanoratra gazety, ny mpiasan’ny trano printy, ny mpamoaka vaovao, ny mpivarotra gazety-
Ny mpiasan’ny televisiona-
Ny mpaka sary
25 avril – 1er mai : Vavaka ho an’ny Fianarana.
Ny mpampianatra, ny mpianatra, ny mpandraharaha eo amin’ny toeram-pianarana, ny mpanadio ny toeram-pianarana, ny oniversite, ny lysea, ny kolejy, ny ambaratonga-voalohany.
2 mai- 8 mai : Ho an’ireo izay tsy mahita fianarana sy tsy afaka mianatra
9 mai- 15 mai : Ho an’ny handicapé sy ny toeram-pitaizana misy.Ireo mpikarakara azy.
16 mai – 22 mai : Ho an’ny mpiompy sy ny mpamboly
23 mai – 29 mai : Ho an’ny mpiompy sy mpamboly
30 mai – 5 juin : Ho an’ireo izay tsy manantrano sy trano fa nalana tamin’ny taniny.
6 juin -12juin : Ho an’ireo izay nampijalina satria nanohitra ny tsy fahamarinana.
13 juin – 19juin : Ho an’ireo izay noana noho ny fahantrana
20 juin – 26 juin : Ho an’izay rehetra monina ao Madagasikara
27 juin -3juillet : Ho an’ny mpanjono an-dranomasina
4 juillet- 10 juillet : Ho an’ny mpiasan’ny fitodiatsambo
11juillet – 17 juillet : Ho an’ny mpiasan’ny fitodiampiaramanidina.
18 juillet – 24 juillet : Ho an’ny mpiasan’ny faditseranana.
25 juillet – 31 juillet : Ho an’ireo mpanadio ny tanana.
1er aout – 7 août : Ho an’ireo mpiasa an-trano
Alahady fahatelo amin’ny Karemy 2016
Alahady fahefatra amin’ny Karemy 2016
CHRIST EST LA VRAIE VIE
Ireo aretin’ny fiainam-panahy
Lova Faniry malalanay
Retrouvez tous nos articles depuis l’année 2002. Sélectionner un mois mars 2022 (1) décembre 2021 (2) juillet 2021 (1) juin 2021 (2) mai 2021 (2) avril 2021 (1) février 2021 (1) janvier 2021 (1) décembre 2020 (2) novembre 2020 (2) octobre 2020 (1) septembre 2020 (1) août 2020 (1) juin 2020 (2) mai 2020 (2) avril 2020 (2) mars 2020 (2) février 2020 (2) janvier 2020 (2) décembre 2019 (6) novembre 2019 (4) octobre 2019 (2) juin 2019 (2) mai 2019 (1) avril 2019 (6) mars 2019 (1) février 2019 (1) décembre 2018 (5) novembre 2018 (1) août 2018 (2) juillet 2018 (2) mai 2018 (2) avril 2018 (1) mars 2018 (8) février 2018 (2) janvier 2018 (4) décembre 2017 (6) novembre 2017 (1) octobre 2017 (1) septembre 2017 (1) août 2017 (3) juillet 2017 (2) juin 2017 (7) mai 2017 (2) avril 2017 (4) mars 2017 (2) février 2017 (1) janvier 2017 (1) décembre 2016 (2) octobre 2016 (1) juillet 2016 (1) juin 2016 (1) mai 2016 (2) mars 2016 (2) février 2016 (6) janvier 2016 (2) décembre 2015 (5) novembre 2015 (1) octobre 2015 (2) septembre 2015 (2) juillet 2015 (1) avril 2015 (3) février 2015 (3) janvier 2015 (4) décembre 2014 (3) novembre 2014 (4) octobre 2014 (1) août 2014 (1) mai 2014 (1) avril 2014 (6) mars 2014 (3) décembre 2013 (1) novembre 2013 (1) octobre 2013 (2) août 2013 (6) juillet 2013 (3) juin 2013 (3) mai 2013 (2) avril 2013 (1) mars 2013 (6) février 2013 (4) janvier 2013 (2) août 2012 (5) juillet 2012 (5) juin 2012 (3) mai 2012 (3) avril 2012 (7) mars 2012 (3) février 2012 (2) janvier 2012 (3) décembre 2011 (3) novembre 2011 (2) octobre 2011 (5) septembre 2011 (4) août 2011 (1) juillet 2011 (6) juin 2011 (5) mai 2011 (4) avril 2011 (7) mars 2011 (1) février 2011 (1) janvier 2011 (3) décembre 2010 (2) novembre 2010 (1) octobre 2010 (1) septembre 2010 (3) août 2010 (1) juillet 2010 (6) juin 2010 (1) mai 2010 (3) avril 2010 (1) mars 2010 (5) février 2010 (4) janvier 2010 (6) décembre 2009 (2) novembre 2009 (3) octobre 2009 (3) septembre 2009 (1) août 2009 (1) juillet 2009 (1) juin 2009 (2) mai 2009 (5) avril 2009 (10) mars 2009 (4) février 2009 (5) janvier 2009 (7) décembre 2008 (5) novembre 2008 (6) octobre 2008 (3) septembre 2008 (4) août 2008 (4) juin 2008 (1) avril 2008 (1) mars 2008 (1) février 2008 (1) janvier 2008 (2) décembre 2007 (1) novembre 2007 (1) août 2007 (3) juin 2007 (4) mai 2007 (1) avril 2007 (1) mars 2007 (4) février 2007 (4) janvier 2007 (7) décembre 2006 (9) novembre 2006 (4) octobre 2006 (7) septembre 2006 (4) août 2006 (2) juillet 2006 (4) juin 2006 (3) mai 2006 (5) avril 2006 (7) mars 2006 (11) février 2006 (8) janvier 2006 (9) décembre 2005 (10) janvier 2005 (1) septembre 2004 (2) août 2004 (3) juillet 2004 (5) juin 2004 (4) mai 2004 (2) avril 2004 (6) mars 2004 (2) février 2004 (3) janvier 2004 (5) décembre 2003 (4) novembre 2003 (6) octobre 2003 (1) mai 2003 (4) avril 2003 (17) mars 2003 (1) février 2003 (4) décembre 2002 (3) novembre 2002 (1) octobre 2002 (6) septembre 2002 (4)
CHRIST EST LA VRAIE VIE 26/03/2022